Emmerson Mnangagwa Archives - Political Economist
Home›Posts Tagged "Emmerson Mnangagwa"
Zimbabwe hiked its average electricity tariff by 320% on Wednesday to ramp up power supplies at a time of daily blackouts, but the move will anger consumers already grappling with soaring inflation that is eroding their earnings. The southern African nation is experiencing its worst economic crisis in a decade, seen in triple-digit inflation, 18-hour ...
The family of former Zimbabwe president Robert Mugabe gathered in his rural homestead on Saturday, three weeks after his death, to attend a much-awaited burial ceremony in the village of Kutama. Mugabe died in a Singapore hospital on 6 September, aged 95, almost two years after a military coup ended his despotic 37-year ...
Late Mugabe Zimbabwe’s longtime ruler Robert Mugabe will be buried in his home district of Zvimba, not at a national shrine in Harare as previously planned, the government said on Thursday, after three weeks of public disputes over his final resting place. Mugabe’s rule included a disastrous economic decline and political violence that forced ...
Zimbabwe’s founder Robert Mugabe was honored as an icon, principled leader and African intellectual giant at a state funeral on Saturday, after a week of disputes over his burial threatened to embarrass President Emmerson Mnangagwa. Mugabe led Zimbabwe for 37 years, from independence until he was ousted by the army in November 2017, by which ...
Zimbabwe’s founder Robert Mugabe will be buried at a national shrine in Harare on Sunday, the Mugabe family spokesman said on Friday, contradicting comments a day earlier which suggested the family was resisting the government’s burial plans. Mugabe, who ruled Zimbabwe for 37 years until he was ousted by his own army in November 2017, ...
The body of Zimbabwe’s founder Robert Mugabe arrived at the country’s main airport on Wednesday, but his final resting place remained a source of mystery amid a dispute between some family members and the government. Mugabe, one of the last “Big Men” of African politics who ruled the southern African nation for 37 years until ...
A plane has left Zimbabwe for Singapore carrying government officials and relatives to bring home the body of Robert Mugabe, but it was still not clear where the former leader would be buried, a family spokesman said on Monday. Mugabe’s family is pushing back against the government’s plan to bury him at the National Heroes ...
The family of Zimbabwe founder Robert Mugabe is pushing back against the government’s plan to bury him at the National Heroes Acre monument in Harare and wants him to be buried in his home village instead, three relatives told Reuters. Zimbabweans have been confused about when and where they would get to pay their last ...
The Zimbabwean government plans a state funeral for longtime ruler Robert Mugabe in a sports stadium in Harare next Saturday, with a burial ceremony a day later, it said in memo sent to embassies on Sunday. Zimbabweans have been confused about when they would get to pay their last respects to Mugabe since his death ...
In the dusty village where Zimbabwe’s founding father Robert Mugabe grew up, family members speak of the deep bitterness Mugabe felt from his ousting as head of state two years ago until his death in Singapore on Friday. Mugabe, who died aged 95, was a totemic figure for his role in the struggle against white ...